Fihaonana - Delta Engineering Belzika
Archive avy amin'ny sokajy "Conveying"
Talata 14 martsa 2017 by Delta Engineering
Ity tavoahangy tavoahangy ity dia manangana tavoahangy ho avo kokoa noho ny tsipika fampitaovana tavoahangy. Izy io dia afaka mampita ireo tavoahangy etsy ambony alley, na hamindra azy ireo amin'ny ambaratonga hafa. Amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana 2 lafiny misy sakany azo refesina.
Published in ascenseur
Lalam-piseur - 1 ho 2 zotra
Ity mpanova lalana ity dia mizara andalana miditra ho 1 amin'ny andalana roa. Amin'ity fomba ity, ianao dia mahazo ny hafainganam-pandehan'ny tavoahangy mety tsara (tsy mihoatra ny hafainganam-pandeha feno tavoahangy isaky ny lalana).
Published in Lalan'ny mpanova